Dastabej » सुख्खा रोटि बोकेर साईलकमा नेपाललाई एक फन्को
सुख्खा रोटि बोकेर साईलकमा नेपाललाई एक फन्को – Dastabej
सुख्खा रोटि बोकेर साईलकमा नेपाललाई एक फन्को
नेपालगन्ज । झापाका तेजप्रसाद पराजुली साइकलेहरुका माझ एभरेस्ट बाबुका नामले चिनिन्छ्न् । उनले २०७५ साल बैशाख ९ गते पुर्वको मेची पुलबाट साइकल यात्रा सुरु गरी २०७५ माघ १३ गते सुदुरपश्चिमको दार्चुला पुगेर टुङ्ग्याए । यो अवधीमा बिचबिचमा उनले विश्राम लिदै यात्रा गरेको र कुल ६ महिना साइकल कुदाएर नेपाल का ७७ वटै जिल्ला साइकलमा पुगेको सुनाए। नेपालमा साइकलबाट मात्रै होइन सम्भवत ७७ जिल्ला पुग्ने उनी पहिलो नेपाली हुन् । उनले घरबाट १२ वटा गहुँको सुख्खा रोटि र २ सय रुपैयाँ मात्रै बोकेर साइकलमा पुरा नेपाल डुले । साइकल यात्राको लागि नेपालकै पुरानो साइकल पसल PANC Bike ले उनलाई साइकल स्पोन्सर गरेको थियो। सिङ्गो देश यसरी साइकलमा डुल्न पाउँदा उनी गौरवान्वित छन् र उनले सानै उमेरमा यस्तो साहसिक साइकल यात्रा पुरा गरे। उनीसंग नेपाल डुल्दाका अनौठो अनौठो अनुभवहरु छन् ।२० बर्षको अल्लारे उमेरमा साइकलबाट पूरा देश चक्कर लगाउँन पाउँदा आफुले आफैंलाई जितेको अनुभुती भएको पराजुलीले बताए । दोलखाका साइकल यात्री पुष्कर शाह साइकलबाटं घुमेर लेखेको पुस्तक संसारलाइ साढे पाँच फन्को पढेपछि त्यसैले आफुलाइ साइकलमा निस्कन प्रेरित गरेको उनले सुनाए ।
रहर अनेक, साईकलबाटै मेचीमहाकाली यात्रा पूरा गर्ने साइक्लिस्ट बढ्दै
अप्ठ्यारोका सम्झना के छ त ? त्यो साइकल यात्राको प्रश्नमा एभरेस्ट बाबुले बताए,तेह्रथुम जिल्ला अठराइ गाँउपालिका वाड न. २ भोटे खोल्सिको भिरबाट सइकलसहित म २० मिटर तल र म भन्दा २० मिटर तल साइकल खस्यो। मेचि महाकालि यात्रामा ४ दिनसम्म खाना नखाइ यात्रा गर्नु पर्यो । डोल्पा , हुम्ला र कालिकोट का सम्झना यसरी सुनाउँछ्न उनी, डोल्पाको सिमाना कर्बगार्ड भन्ने ठाँउमा त्यहाँको स्थानीय युवाले नष्खभ Give Me 200 डलर नभए टायर काट्दिन्छु भने। एक खच्चडवाला हजुरबुवाले ती मेरा पाहुना हुन छोडि देउ भनेपछि।आफ्नै अभिभावक भटेको अनुभूति भयो, कता कता। हुम्ला सदरमुकाम सडक जोडिएको थिएन। कोल्टि Airpot मा प्रहरी कार्यलयमा साइकल राखेर हुम्लाको ताँजाकोट गाँउपालिकासम्म पैदल जाने तय गरे। एक्लै पुग्यला कि नपुगियला भनेर मन खलबलाइ रहेको थियो ।नभन्दै उतै जाने एक जना डाक्टर सहयात्री भेटिए। (उहाले भन्नूभयो यसठाउँमा खच्चडको धुलोले दिउँसो हिड्न सकिँदैन त्यसलै रातभर हिडौ भन्नू भयो । मेरो मनमा कता कता चिसो पलायो । बा कतै यिनले मलाइ केहि त गरेदैनन् । रातको यात्रामा मध्य रातसम्म गफ गरेदै हिडियो । राति तुसारो धेरै पर्न थाल्यो । ठन्डि बढ् र बास खोज्न थालियो। मुगुको भुलभुले भन्ने ठाँउमा अत्यधिक हिउँ परेकाले नेपाली सेनाको ब्यारेकमा साइकल राखेर पैदल जाने तय गर्यो सेनाले कउयचतक कजयभक हाइन हाम्रो बुट भरपाइमा लगाएर जान सल्लाह दिनु भयो। मुगुबाट फर्किने बेलामा दुबै खुट्टाको पछाडि ठूलाठूला फोका निस्कियको थियो । ती फोकाले कालिकोट फर्कन एकदमै पीडा भएको थियो। पराजुलीलाई सबै भन्दा राम्रो लागेको ठाउँ मनाङ, मुस्ताङ, पोखरा प्रमुख प्रख्यात पर्यटकीय स्थलपछि मन परेको ठाउँ गुल्मि र दोलखा लाग्यो रे ।
सुदुरपश्चिम कालिका ७ कन्चनपुरका तिर्थराज अवस्थिले पनि साइकलबाट महाकाली मेचीको साइकल यात्रा १२ दिनमा पूरा गरेको बताउँछन् । रक्तदान जिवनदान भन्ने मुल नारा बोकेर रक्तदान का लागि सबैलाई प्रेरित गर्नु उनको मुख्य उद्देश्य भएको उनले बताए । उनले आफ्नो महाकाली मेचीको साइकल यात्रा २०७१ असोज ९ गते बाट सुरु गरेको जानकारी दिए । हाल कास्की पोखरालाई कर्मथलो बनाएर बसेका अवस्थी अझै पनि रक्तदान अभियानमा सक्रिय छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका ४ रुपन्देहीका एचबी बर्माले २०५६ मंसिर १० बाट इलामको पशुपतिनगरबाट साइकल यात्रा सुरु गरी महाकालीको दोधारा चाँदनी पुलमा मंसिर २२ गते यात्रा पुरा गरे । यसरी ५६ बर्षको पाको उमेरमा १० दि मा नै मेचीमहाकाली साइकल यात्रा पूरा गरेका बर्मा सङ्ग थुप्रै अनुभुहिहरु छन् । सबैभन्दा मजा बर्दिया रास्ट्रिय निकुञ्ज पार गर्दै कर्णाली पुल पुग्दासम्म लागेको उनले बताए । साइकलमा मेची महाकाली गर्दा विभिन्न शहर ठाउँ चिन्ने मौका र त्यहाँका रितिरिवाज र चालचलन बुझ्न पाएकोमा उनी खुस छन् । साइकल चलाउ, वातावरण जोगाउ, बिश्व जोगाउ, स्वास्थ्य बनाउ भन्ने नारा बोकेर आफूले साइकल यात्रामा निस्किएको उनले जनाए ।
हेटौंड का साइक्लिस्ट राजु थापा सारु मगरले साइक्लिङ्ग सम्झना आफ्नो फेसबुक मार्फत लेख्दै केहि फोटोहरु समेत पोस्ट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, मकवानपुरे साईकिलिस्ट मेची माहाकाली साईकल यात्रा गर्ने सायदै पहिलो टिम हुन सक्छ जस्मा २१ वर्षे युवा देखि ७० वर्षसम्मका युवा जोस भएका साईकल यात्री सहभागी थिए ।२०५४ पुस २७ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म भ्रमण बर्ष १९९८ को अवसर पारेर ११ जना साइक्लिस्टहरुले साधारण साइकलबाट मेचीमहाकाली यात्रा पुरा गरेको फोटोसमेत उनले शेयर गरेका छन् । जसमा राजु राना मगर ,रामचन्द्र पराजुली , गङ्गादत्त बिडारि, लक्ष्मीचरण श्रेष्ठ , उद्धव अधिकारी , दिपक ढकाल , लक्षमण न्युपाने,माधवप्रसाद सुवेदी, रामहरि शर्मा ढकाल ,रामशरण सापकोटा र भानुभक्त आचार्य रहेको उल्लेख छ।
आज चौथो दिन साइकल यात्री शाह लुम्बिनीमा
महाकाली मेची साइकल यात्रामा कोभिड १९ बाट दिवङ्गत भएका नेपालीहरुको आत्मा शान्ति को कामना सहित महाकालीको दोधाराचाँदनी बाट श्रावण १८ गते यात्रा शुरु गरेका बाके खजुरा निवासी तेजबिक्रम शाह यात्रा को तेस्रो दिन नेपालगन्ज बाट १२९ किलोमीटर साइकल यात्रा पुरा गरी हिजो राती दाङको लमही पुगेका छन् । लमहीमा साइकल यात्री शाहलाई दाङ साइक्लिङ्ग संघ का अध्यक्ष तथा मेचीमहाकाली साइकल यात्री रेशम केसिसहित का साइक्लिस्टहरुले स्वागत सम्मान सहित बसाई ब्यबस्थापन गरेको साइकल यात्री शाहले बताए । आज बिहिबार राती लुम्बिनी पुग्ने लक्ष्य सहित लमही बाट यात्रा सुरुगरेका छन् । उनलाई तौलिहवाका साइक्लिस्टहरु मेचीमहाकाली यात्रा २०५६ मा पुरा गर्नु भएका एचबी बर्माहरुले स्वागत गर्ने छन् ।
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार १४:२९ प्रकाशित